Android၊ ၂၀၁၁ OpenSource | Linux မှ
Android, 2011 ၏ OpenSource
လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်က တီနာတိုလီဒို သူကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တစ်ခုခုပြောနေတယ်။ အကြောင်းပါ PC World ၏အဆိုအရကျွန်ုပ်တို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုသင့်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက ... အန်းဒရွိုက် စာရင်းထဲတွင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဖြစ်ကောင်း အန်းဒရွိုက် မလုံလောက်သေးဘူးလား ...
အမှန်မှာ၊ အမှန်တရားမှမည်သည့်အရာမျှ ထပ်မံ၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အန်းဒရွိုက် ဤ 2011 သံသယမရှိဘဲဖြစ်ခဲ့သည် ယခုနှစ်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အဘယ်အရာကိုအများဆုံးမှတ်ချက်ချခဲ့, အဘယ်အရာကိုအများဆုံးပြောဆိုသောခဲ့သည်။
ဒီထက်ပိုပြီးပြောပြရန်ဆောင်းပါးတစ်ခုမှအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်မှီခိုလိမ့်မည် Ostatic.com ဤလများအတွင်းသင်ဤဆိုဒ်တွင်သင်ဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့သည့်ဆောင်းပါးပေါင်းများစွာ၌ပါရှိသည်။
အများစုသည် Linux ကိုလက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့်ကြည့်နေကြသော်လည်းသူတို့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ချင်ကြသည် HTC က ကြောင်းစျေးကွက်ဝင်တိုက်အဖြစ်၎င်းတို့၏ကိုးကွယ်လိမ့်မယ် Samsung Galaxy S II ကို။ သူတို့သည်ကြောက်လန့် / မုန်းတီးရာများကိုအလွန်အမင်းအသုံးပြုနေသည်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့ Linux ကြသည် - Linux 😀
ယူနိုက်တက်စတိတ် (US) စျေးကွက်မှအကောင်းဆုံး reception ည့်ခံပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက်ဒါကိုကျော်ပြီးကျော်ကြားလာတာပါ iOS ကို de Apple အဖြစ်ကောင်းစွာဈေးကွက်ထဲမှာ ထို့အပြင် downloads ၌တည်၏ (ဟုတ်ကဲ့၊ လူကြိုက်များရုံသာမက၊ ကျွန်ုပ်တွင်နာမဝိသေသနများအသုံးပြုရန်ပိုမိုရှိသည်။ သို့သော်စိတ်ကူးသည်ဘက်လိုက်သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မဟုတ်ပါ).
ဤရွေ့ကားစာရင်းဇယားများအတွက်စျေးကွက်တစ်ခုတည်းကိုသာသီးသန့်ရည်ညွှန်းသည် ယူအက်စ်အေပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလနှင့်နိုဝင်ဘာလ။ သင်ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားနိုင်သလဲ အန်းဒရွိုက် ဤလများအတွင်းဈေးကွက်တွင်တိုးတက်မှုရှိခြင်းကြောင့် OS ဈေးကွက်၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသည် စမတ်ဖုန်းများ.
ဒါပေမယ့်လည်းဒီဟာကမလုံလောက်ဘူး ... အံ့သြစရာကောင်းတယ် Google မှ Motorola Mobility ဝယ်ယူမှု ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများကိုဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
လူများစွာကိုပျော်ရွှင်စေပြီးလူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ဒီသတင်းဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျံ့နှံ့လာတာနဲ့အမျှလူတွေဟာဒီအကြောင်းကိုပြောခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပုံကအလျင်အမြန်ပါပဲ။ ဂူဂဲလ်အခုဘာတွေလုပ်မလဲ ... အဘယ်ကြောင့်ဒီတိတ်ဆိတ်?
ကျွန်ုပ်အားတစ်ခုခုပြောသောမေးခွန်းများကိုလာမည့်နှစ် year တွင်ဖြေကြားပေးပါမည်
ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုတည်းမလုပ်ပါဘူး အန်းဒရွိုက် (ငါ့အမြင်အတွက်) ဖြစ်ခဲ့သည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် ယခုနှစ်။
သို့သော်၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းများအတွက် OS (Operating System) တစ်ခုအနေဖြင့်စတင်ခဲ့သည် ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် install လုပ်နိုင်ပါတယ်ငါတို့ပင်မကြာသေးမီကသူတို့ကိုပေး၏ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဒီစီမံကိန်းကနေ။
အဲဒီမှာတစ်ခုထက်ပိုပါတယ် အမဲချိတ်, တစ်ခု အမေဇုံ နှင့်အခြားပဲ Dell က y ဘိုင်ဒူနှင့်မယုံနိုင်စရာအရေအတွက် 700.000 နေ့စဉ် activation, အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကိန်းဂဏန်းများအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြသရကြောင်းကိုရှင်းပြသည်
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကြီးထွားမှုသည်အဆ၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပရိတ်သတ်များအတွက်ပျော်စရာကောင်းပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
ဒီ ၂၀၁၂ ဟာလူတိုင်းအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အံ့သြစရာကောင်းစေမှာပါ။ သူတို့ကိုသာစောင့်ပါ
PD: အစောပိုင်းကငါကပြောသည် ယူအက်စ်အေ အကောင်းဆုံး reception ည့်ခံပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက်ကောင်းပြီ, ငါပဲဖတ်ပါ အာဂျင်တီးနား ၎င်းသည်လက်တင်အမေရိကရှိတစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်သည် Android က iOS ကိုကျော်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Android, 2011 ၏ OpenSource
synthesizers အပေါ် Linux ကို